Uninzi lweZiko lokuHlola iZiko loPhuhliso lwabathuthuli - Ukwaziswa okufutshane kwiSemalt
Ukukhwela kwiWebhu kusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo kule mihla. Yinkqubo enzima kwaye idinga ixesha elininzi kunye nemizamo. Nangona kunjalo, izixhobo ezahlukeneyo ze-web-crawler ziyakwenza lula kwaye zenze i-automation yonke inkqubo yokukhawulela, ukwenza idatha ibe lula ukufikelela kwaye ihlelwe. Makhe sihlolisise uludwe lwezixhobo ezininzi ezinamandla kunye nezilungelelanisi ze-intanethi ukuya kutsho. Zonke izixhobo ezichazwe apha ngezantsi zinceda kakhulu kubaphuhlisi kunye nabaprogram.
I-Scrapinghub iyi-extra-based data and toolbar. Inceda kumakhulu ukuya kumawaka abaphuhlisi bayifake ulwazi oluxabisekileyo ngaphandle kokuphuma. Le nkqubo isebenzisa i-Crawlera, ehamba phambili engummangaliso kunye nommangaleli we-proxy rotator. Ixhasa i-counter-measure measure counter and measures the website-protected-blocked web sites. Ngaphezu koko, kukuvumela ukuba ulandele indawo yakho kwiidilesi ezahlukeneyo ze-IP kunye neendawo ezahlukeneyo ngaphandle kokufunwa kolawulo lweproxy, ngokubulela, esi sixhobo siza kunye nenketho epheleleyo ye-HTTP API ukwenzela ukuba izinto zenziwe ngokukhawuleza.
Njenge-crabler-web based browser. kwiindawo ezilula kunye eziphambili. Ibonelela ngeendlela ezintathu eziphambili: i-Extractor, Crawler, kunye nemibhobho. I-Dexi.io yenye yeyona ndlela ihamba phambili kwaye iyamangalisa i-web scraping okanye iinkqubo ze-web zokukhawulela abaphuhlisi..Ungagcina idatha ekhishiwe kumatshini wakho / idiski ekhuni okanye uyifake kwi-server yakwaDexi.io ezimbini kwiiveki ezintathu ngaphambi kokuba zigcinwe kwi-archived.
I-Webhose.io yenza abathuthuli kunye ne-webmasters ukuba bafumane idatha yenkcazelo yangempela kwaye baqhekeze phantse zonke iintlobo zomxholo, kuquka iividiyo, imifanekiso , kunye nokubhala. Unako ukwandisa iifayile kwaye usebenzise imithombo eninzi efana ne-JSON, RSS, kunye ne-XML ukuze ufumane ifayile yakho igcinwe ngaphandle kwengxaki. Ngaphezu koko, esi sixhobo sinceda ukufikelela kwiinkcukacha zembali kwi-Archive section, oku kuthetha ukuba awuyi kulahlekelwa nantoni kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ixhasa ngaphezu kweelwimi ezingamashumi asibhozo.
4. Ngenisa. Io:
Abathuthukisi bangenza iifasethi zangasese okanye bafake idatha evela kumaphepha athile ewebhu kwi-CSV esebenzisa i-Import.io. Ngenye yezona zinto zilungileyo kunye ezinobuncedo kakhulu kwiwebhu okanye izixhobo zokucoca idatha. Iyakwazi ukukhipha iphepha elingu-100+ ngemizuzwana kwaye yaziwa ngokuba yi-API yayo eguquguqukayo neyenamandla, ekwazi ukulawula i-Import.io ngokweprogram kwaye ikuvumela ukuba ufikelele kwi-data ehlelwe kakuhle. Ukuze ube nolwazi olungcono lomsebenzisi, le nkqubo inika ii-apps ze-intanethi ze-Mac OS X, i-Linux kunye ne-Windows kwaye ikuvumela ukukhuphela idatha kokubhaliweyo kunye neefomati zemifanekiso.
Ukuba ungumqhubi onobuchule kwaye ujonge ngokuphangaleleyo inkqubo yokukhwela kwewebhu, kufuneka uzame ama-80legs. Ithuluzi eluncedo elithatha ubuninzi beemali kwaye linikezela ngezinto zokusebenza zokukhwela kwi-intanethi ngexesha eliphezulu. Ngaphezu koko, i-80legs isebenza ngokukhawuleza kwaye inokukhenkceza iindawo ezininzi okanye iiblogi ngemizuzwana nje. Oku kuya kukuvumela ukuba ulandele yonke idatha okanye inxalenye yendawo yeendaba nakwizentlalo zoshishino, i-RSS kunye ne-Atom feed, kunye neeblogi zokuhamba ngasese. Iyakwazi kwakhona ukugcina idatha yakho ehlelwe kakuhle kwaye ehlelwe kakuhle kwiifayile ze-JSON okanye i-Google Amadokhumenti.